Galaxy A9 Star & A9 Star Lite: fanamafisana voamarina ao Shina | Androidsis
Samsung no marika be mpividy indrindra eo amin'ny tsenan'ny smartphone, na dia ny fivoaran'ny marika toa an'i Huawei sy Xiaomi aza dia mangalatra tany amin'ny tsena sasany. Noho izany, ny orinasa Koreana dia mitady hanitatra ny katalaogin'ny telefaona misy maodely vaovao. Telefaona vaovao roa no ho avy tsy ho ela dia ny Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite, maodely roa izay efa tafaporitsaka be tato ho ato.
Fa hatramin'izao dia mbola tsy fantatra hoe rahoviana izy ireo no hidona amin'ny tsena ary maro no manontany tena raha tena izy ireo. Farany, Nisy afisy namoaka iray izay manamafy ny fanombohana ireo Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite any Shina.
Ireo maodely roa ireo dia hahatratra ny eo anelanelan'ny marika Koreana. Raha ny anarany dia misy ny manantena famolavolana mitovy amin'ny Galaxy A9, fa ny tena izy dia toa hitondra endrika hafa izy ireo. Farafaharatsiny izany no hita efa eo amin'ny afisy efa navoaka avy amin'ny telefaona roa.
Azontsika jerena izany Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite dia hiloka amin'ny efijery misy zana-kazo manify, azo inoana fa misy 18: 9. Ao ambadik'izany isika dia mahita fantsom-panafody sy fakan-tsary indroa, izay amin'ity tranga ity dia voalamina mitsangana. Azo antoka fa ny toerana misy ny fantsom-panafody dia haneho hevitra amin'ireo mpampiasa.
Amin'io afisy io ihany, ny 15 Jona no voalaza fa daty. Ka antenaina fa amin'ity daty ity dia halefa any Chine ireo maodely roa ireo. Ka afaka tapa-bolana dia ho tonga eto amin'ity firenena ity ny Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra na ho tokana izy ireo amin'ity tsena ity.
Azo antoka fa izany Ny antsipiriany misimisy momba ireo Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite ireo dia hosivanina amin'ny andro ho avy. Noho izany dia hitandrina tsara amin'ny antsipiriany misimisy momba ny fandefasana azy izahay, sy ny andinindininy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Afisy tafaporitsaka nanamafy ny fanombohana ny Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite
Oppo Find X dia nohamafisin'ny Oppo tamin'ny fomba ofisialy